Inta badan, waxaa loo baahan yahay si loogu badalo files ka format FLV jira qaab ka MP4 ka badan socon. Horaantii, FLV meel caan ah oo internet-ka ah ee qaab video qaban ay sabab u tahay helitaanka Adobe Flash fur-in. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo horumarka technology browser iyo Flash fur-in, qaab FLV bilaabay meeshiisii ​​laga badiyay. Martigelin Video adeegyada dhif ah isticmaali FLV hadda oo waxay u jeediyeen inay MP4 sida qaab video cusub ee caadiga ah ee internetka.
Qaab MP4 caawisaa dadka isticmaala leh tayo sare video content iyo raaxo ee riixo, la dhimi size file. Sidaa darteed, baahida loo qabo in FLV Converter MP4 ayaana haatan soo baxday.
Qeybta 1: FLV Best in MP4 Video Converter
Qeybta 2: FLV Free in Converter MP4
Qeybta 3: FLV Online in Converter MP4
Qeybta 4: Dooro FLV in MP4 Video Converter in adiga kugu habboon
Qeybta 5: Aqoonta Extended u FLV iyo MP4 Qaabka
Wondershare Video badaley Ultimate lagala soo bixi karaa 'wondershare.com'. Codsiga waxaa laga soo degsan karaa Windows iyo MAC. Waxaa diinta qaabab video kala duwan, mid ka mid ahna MP4. File ayaa la gediyay loo isticmaali karaa qalabka kala duwan sida Apple, Samsung, iwm Ma jiro waayi maayo tayada iyo gol dheeraad ah faylka la gediyay. Sidoo kale, tani waxay ku badaley shuqullada xawaare ka badan xawaaraha oo dhan converters kale 30 jeer.
Waxaad isticmaali kartaa Converter ah si loogu badalo file talooyin ugu soo galay qaab kasta, shiidaa
Kuu ogolaanayaa geeyo wireless aad telefishinka oo aan u baahan wax kasta oo qalabka durugsan
Joogo taageero DLNA
Waayo-aragnimo DVD in damaanad caddeeyo oo tayo leh
Download videos ka YouTube in click hal
Sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo ka FLV in MP4
Talaabada 1: Marka aad dhamaysato habka loo xirxiro ka dib markii degsado Converter ka website-ka, ay maamulaan barnaamijka on your computer. Halkaa marka ay marayso, users waxaa lagula talinayaa inay ku qaataan dhowr daqiiqo waxbarasho interface ka.
Talaabada 2: jiid file FLV aad rabto si loogu badalo ka nidaamka. Interface ayaa sare ee Wondershare Video Converter Ultimate kuu ogolaanaya in aad si fudud u jiidi aad file barnaamijka. Waayo, kuwa khiyaano, inaad koombiyuutarka fursad u fudud ayaa sidoo kale waxaa la heli karaa.
Tallaabada 3: Marka file waxaa lagu daray barnaamijka (tani waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo haddii faylka waa reer size weyn), waxaad dooran kartaa doorasho edit ku koonaha midig inuu wax ka beddelo ilaha video. Interface tafatirka waa cadaalad ah fududahay in la isticmaalo iyo in la isticmaali karo in lagu daro saameynta cajiib ah in aad video.
Talaabada 4: Marka aad ku badbaadi isbedelada, guji badhanka diinta ah. Hubi in doorashada soo saarka la doortay 'MP4' dhinaca tiirka midigta. Waxaad isticmaali kartaa iyada oo qaar ka mid ah qaabab kale wax soo saarka iyo weliba. Sug ilaa hawlaha qaab beddelidda waa dhameystiran yahay. Video saarka ayaa la badbaadin lahaa in meesha ku cad ugu hooseysa ee interface ka.
Sida loo Beddelaan Video galay Qaabka MP4 la Wondershare Video Converter Free
Talaabada 1: Marka aad la sameeyo habka dajinta iyo rakibo (si aad u hanuuntaan doonaa tallaabo kasta oo ku rakibo), ordo barnaamijka on your computer. Halkaa marka ay marayso, waxaa lagu talinayaa in aad qaadato xoogaa waqti ah in loo isticmaalo in lagu interface ka.
Talaabada 2: Waxaad gali kartaa video la doonayo in la badaley. Interface ayaa kuu ogolaanaya in aad si fudud u jiidi video ah barnaamijka, iyada oo aan ka kaaftoomi mid ka mid ah u soo xulan folder khaas ah. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarka kale ah sidoo kale ayaa loo diyaariyay.
Tallaabada 3: Marka aad uploaded video ah barnaamijka (tani waxay qaadan kartaa muddo ah haddii video waa mid aad u weyn), waxaad dooran kartaa qalabka tafatirka oo kuu ogolaanaya in aad ku darto saamaynta badan si aad video. Qalab tafatirka waa cadaalad ah fududahay in la isticmaalo iyo u oggolaanaysa in looga gol leeyahay ee video ah.
Talaabada 4: Marka aad ku badbaadi isbedelada, xulo qaab la doonayo saarka ka column gacanta midig kooxda (kiiskan, MP4), iyo qaab beddelidda, adigoo gujinaya 'Beddelaan'. Waxaad hadda u helida horumarka aad diinta ee interface ka.
FLV Online in Converter MP4
FLV Free in Converter MP4
Best FLV in MP4 Video Converter
Flash Video (FLV, F4V) waa qaab file weelka loo isticmaalaa in lagu samatabbixin video internetka isticmaalaya Adobe Flash Player versions 6-11 ah. Flash Video content sidoo kale laga yaabaa in lagu gundhig gudahood files Jabbuuti. Waxaa jira laba qaabab file video kala duwan oo loo yaqaan Flash Video: FLV iyo F4V. Xogta audio iyo video files ayaa gudahood FLV yihiin encoded si la mid ah sida ay yihiin gudahood files Jabbuuti. MP4 waa qaab weelka loo isticmaalaa in lagu kaydiyo video, audio, iyo xogta subtitles ah. Tan iyo dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weelka iyo waxa la isticmaalay iyada oo iPod iyo Playstation (PSP). Waxa uu noqdo qaab caan ah.
Adobe Systems Guuritaanka Picture Khubarada Group
Video / x-flv Video
Top Five Free FLV Players ee Suuqa
Hordhaca FLV Video iyo qaabab ay
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan FLV in MP4 la Loss Tayada Zero?